Inkampani yethu - iSuzhou Bejarm technology Co., Ltd.
Itekhnoloji yeSuzhou Bejarm Co, Ltd.
Itekhnoloji yeBejarm yasekwa eSuzhou, China. Ukusukela oko yasekwa ngo-2015, ibisenza izixhobo zamandla ezikumgangatho ophezulu wamashishini kunye nokubonelela ngezona zisombululo zibalaseleyo kwimveliso yabathengi basekhaya nabangaphandle. Ngokusekwe kubuchwephesha obukhokelayo kushishino kunye nobuchwephesha bokuvelisa, iimveliso zeBejarm ziye zafezekisa umgangatho ophezulu kwicandelo leemveliso zombane zorhwebo ezineenzuzo zobugcisa ezinobutyebi kunye neekhonsepthi zolawulo oluphambili, Ziyacetyiswa kakhulu ngabathengi kwaye zikhule zaba yinkampani edibeneyo yokuvelisa kunye neyorhwebo ezisisiseko seetekhnoloji.
Le nkampani iye iqela R & D yobungcali kunye neminyaka engaphezu kwama-17 yamava kuphando kunye nophuhliso Motors umazibuthe esisigxina. Sineqela lamalungelo awodwa omenzi wechiza kunye nezatifikethi ezininzi zamanye amazwe. Iinxalenye ezingundoqo umazibuthe fan fan osisigxina bonke baqonda imveliso ezizimeleyo, ngokubonelela uzinzo ophezulu kunye ethembekileyo kwiindawo kuyilo imveliso kunye R & D, processing ukuchaneka, ulawulo lomgangatho, kunye noun technical, njl
I-Bejarm ikakhulu ithengisa iimveliso zeshishini ezinje ngabalandeli bemizi-mveliso, iijenreyitha, kunye nezixhobo zamandla. Ishishini layo ligubungela ngaphezulu kwama-30 amazwe kunye nemimandla kwihlabathi liphela, kwaye isasazwa eYurophu, eMntla Melika, kuMazantsi mpuma eAsia, kuMbindi Mpuma naseAfrika. Sinyanzelisa ukusebenzisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ukwenza ingeniso kubathengi bethu kunye nokubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni zase China kwilizwe liphela.
Umda weshishini: ilayisensi yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle; ukurhweba ngaphakathi nangaphandle arhente. Iiprojekthi ngokubanzi: iinkonzo zobuchwephesha, uphuhliso lobuchwephesha, ukubonisana ngezobuchwephesha, ukutshintshiselana ngetekhnoloji, ukuhambisa itekhnoloji, ukukhuthaza itekhnoloji; ukukhuthaza iteknoloji kunye neenkonzo zesicelo; I-R & D yemoto kunye nenkqubo yolawulo lwayo; I-R & D yeemveliso zekhompyutha; I-R & D yezixhobo zasendlini; R & D yeemveliso zentsimbi; I-R & D yenkqubo yokuhlangana kwe-elektroniki; I-R & D yezixhobo zoomatshini; ukuthengiswa kwezixhobo zombane; ukuthengiswa kwezixhobo zombane; Inkqubo yolawulo oluzenzekelayo lwentengiso Ukuthengiswa kwezixhobo ezimanyeneyo; ukuthengiswa kwezixhobo kunye neemitha; ukuthengiswa kwezixhobo zoomatshini; ukuthengiswa kwamalungu oomatshini kunye namacandelo; ukuthengiswa kwezixhobo zonxibelelwano; ukuthengiswa kwezinto zasendlini; ukuthengiswa kweemveliso zeplastiki; Ihowuliseyili yeekhomputha, njl njl wamkelekile ukuba ubuze.